Rakaab Lagu Qasbay Inay Muddo Saddex Saacadoood Ah Meyd Weheshadaan | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Rakaab Lagu Qasbay Inay Muddo Saddex Saacadoood Ah Meyd Weheshadaan
Stanbul(Hubaal)-Rakaab saarnaa diyaarad kasoo kacday magaalada Aistle ee dalka turkiga, ayaa lagu qasbay inay muddo saddex saacadood ah weheshadaan oo ag fadhiyaan meydka haweenay kamid ahayd rakaabka diyaaradda oo geeriyootay iyada oo diyaaraddu hawada ku jirto duulimaad ay kaga soo laabtay fasax.
Haweenayda geeriyootay oo da’deedu ahayd 50-sano jir, ayaa la sheegay inay la tiicaysay xanuunka Macaanka ama sonkorta loo yaqaanno, waxana loo malaynayaa inay daawadeedii kaga tagtay shandad ay lahayd oo qaybta alaabta culus ee diyaaradda lagu xareeyey.
Haweenayda geeriyootay oo aan magaceeda la xusin, ayaa la sheegay inay geeriyootay markii ay diyaaradda Azur Air flight oo kasoo duushay magaalada Antalya kuna jihaysnayd caasimadda Russia ee Moscow ay hawada ku jirtey muddo 45 daqiiqo ah.
Shaqaalaha diyaaraddan oo ahayd 757, ayaa la sheegayaa inay waxoogaa caawimo ah u samayn karayeen haweenaydan u dhimatay daawada ay sida weyn ugu baahnayd ee ay shandadeeda ku ilawday.
Sida uu sheegay ninka ay haweenayda geeriyootay u dhaxday oo isagana magaciisa la shaacin, ayaa sheegay in xaaskiisu ay dawada ku ridday boorsada alaabta lagu qaato, sababa oo ah waxa ay ahayd inay daawada qaadato hal saacad ka hor intii aanay diyaaraddu duulin.
Dadka rakaabka ah, ayaa geerida kadib go’aansaday inay meydka haweenayda la dhigo goobta loogu talo galay inay rakaabku maraan xilliga ay diyaaradda korayaan iyo marka ay ka degayaan, waxana lagu deday buste.
Duuliyihii diyaaradda, ayaa isaguna go’aansaday inuu hawshiisa duulimaadka iska sii wato oo diyaaradda u kexeeyo dhinaca magaalada Moscow oo ay markii hore ku jihaysnayd, halkii uu degdeg uga fadhiisin lahaa.